Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad Dib Marka a New iPhone 7 / iPhone 7s
Waxaad u badan tahay waa super faraxsanahay saabsan 6s cusub iPhone (Plus) iyo dhammaan qaababka in abuuridda cusub Apple ayaa la filayaa in ay leeyihiin, waa arrin la fahmi karo. Waxaa jira dhowr wax oo aad yeelan doonaan in ay sameeyaan ka heli tago si loo hubiyo in aad iPhone shaqayn doonaan oo ay sii wadaan in ay si sax ah u shaqeeyaan. In this article aan la doonayo in la dhex marayay hubinta waxyaalaha la samayn karo si loo caawiyo in aad heshid cusub iPhone ilaa iyo ordaya.
Aan ku bilaabaan mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan.
Qaybta 1. Guddi aad iPhone6s cusub (Plus)
Qaybta 2. Transfer xogta aad ka phone jir ah u 6s iPhone cusub (Plus)
Qaybta xogta gaarka ah 3. masixi ka phone jir
Qaybta 1. Guddi aad 6s iPhone cusub (Plus)
Talaabada 1: Ka hor inta aadan bilaabin hanaanka hawlgelinta waa fikrad wanaagsan in la hubiyo in version of Lugood aad leedahay waa dambayn. Daar iPhone adigoo haysta hoos button hurdada / awood ugu dhankiisii ​​midig iyo sare. Waa in aad image soo socda. Weerar dadban ku slider bidixda laga bilaabi karo habka hawlgelinta.
Talaabada 2: samaysay af iyo dalka hooyo ee shaashadda sababtay.
Talaabada 3: In uu furmo suuqa soo socda, waxaad u baahan doontaa in aad doorato sida aad rabto in aad qotomisay iPhone. Dooro mid ka mid ah in uu kuu khuseeyo.
Talaabada 4: ka dibna waxaa loo keenay in doonaa inaad gasho ID Apple ama abuuro mid cusub haddii aadan haysan mid.
Talaabada 5: heshiiya in shuruudaha iyo xaaladaha ka dibna go'aan ka gaarto in aad rabto in aad awood Raadi My iPhone.
Talaabada 6: In loo sahlo iCloud Keychain.
Tallaabo 7: In loo sahlo Siri
Tallaabo 8: tallaabada ugu dambeeya waa in la dooran bandhigay Mozilla aad jeceshahay. Waxaad had iyo jeer ka bedeli kartaa ka dib this ee goobaha.
Marka taasi la sameeyo, marka aad si guul shaqeysiin doonaa iPhone.
Waxay u badan tahay in aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan xogta aad telefoon jir ah ayaa tilifoon cusub. Tani waa qayb muhiim ah samaynta telefoonka cusub. Waxaa muhiim ah in aad xogta aad ka mid phone dhaqaaqo kale. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in aad fariimaha jirka ah, qoraalo, Deymaha maqan cod ama xitaa cod mails. Taas waxaad ku samayn karaa siyaabo dhowr ah oo kala duwan. Maqaalkani waxa uu si cad u qeexayaa hababka kala duwan oo aad u isticmaali karto si ay u gudbiyaan xogta si cusub iPhone.
Software mucjisada ah waxaan ka hadleynaa waa Wondershare SafeEraser. Software Tani ee ay Wondershare kaa caawinaysaa in aad tirtirto xogta aad si joogto ah. Ayaa sidaas loo yaqaan "Nadiifinta 1-Click" samayn doonaa si sax ah waxa uu sheegaayo. Waxaa nadiifin doonaa qalab aad oo aad u fiican iyadoo hal click hagaajiyo. Ka sokow nadiifinta qalabka Wondershare SafeEraser bixiya fursado kale oo badan. Waxa kale oo aad cadaadin karo sawiradaada, masixi dhan ah oo xasaasi ah, xogtaada gaarka, masixi dhamaan xogta, iyo xataa masixi xogta aad tirtiray. Marka aad gacanta tirtirto wax ka telefoonka, waxa aanu si joogto ah baaba'aan. Xogta la soo kabsaday karaa, waana sababta tirtiro xogta aad tirtiray noqon karaa mid aad waxtar u leh.
Hadda oo aad wareejiyo dhammaan xogta muhimka ah si cusub oo aad iPhone, markaas ka dib waxaad u baahan tahay inaad masixi xogta gaarka ah ee aad taleefan jir. Wax kasta oo aad sameyn doonaa adiga jir iPhone, tani waa tallaabo muhiim ah oo ay tahay in aan la yasin. Haddii aad ku talo iibinta ama iska tuuray telefoonka, waxaa muhiim ah in aad masixi dhammaan xogta gaarka kuu ah oo ay ku jiraan macluumaadka sirta ah iyo dhaqaale si ay u dhici ma gacmo qaldan.
Mid ka mid ah click in masixi xogta shakhsiga ka iPhone jir
Tirtiro xogta gaarka ah waa in la sameeyaa si buuxda oo ku hoos jira xaalad ammaan ah. Xaaladdan Wondershare SafeEraser waa codsiga shaqada. Qaar ka mid ah qaababka ka dhigi SafeEraser aad wax ku ool waxaa ka mid ah;
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si joogto ah u tirtirto xogta gaarka kuu ah oo ay ku jiraan emails, macluumaad bangiyada iyo magacyo oo dhan si loo hubiyo in ay yihiin unrecoverable
Waxa kale oo ay ogolaan kartaa in aad si joogto ah uga saarto faylasha tirtiray ka phone
Waxaad isticmaali kartaa Safe Eraser si joogto ah masixi wax walba oo ku lug leh qalabka
Halkan sida loo isticmaalo Wondershare Safe Eraser si buuxda u masixi xogta gaarka ah.
Tallaabada Koowaad: download iyo rakibi Wondershare Safe Eraser in aad PC. Orod barnaamijka iyo xiriiriyaan jir iPhone barnaamijka. Daaqadda guriga, Riix masixi Private Data.
Tallaabada Labaad: Barnaamijku wuxuu bilaabaa in uu iskaan iyo falanqaynta xogta on your computer.
Talaabada Sadexaad: Marka scan waa dhameystiran, xogta gaarka loo leeyahay oo dhan lagu soo bandhigi doonaa qaybaha. Fiiri sanduuqka ag xogta aad jeceshay tirtirayaa lahaa. Riix masixi Hadda in ay tirtirto xogta.
Talaabada Afraad: Waxaa lagaaga baahan doonaa in aad ku qor erayga "tirtirto" si loo xaqiijiyo Kabcada_. Riix masixi Hadda mar kale ka dib markii aad samaysay in.
Barnaamijka waxa ay xaqiijin doonaan in xogta la tirtiray.
Mid ka mid ah click in masixi xogta shakhsiga ka phone Android jir
Waxaad sidoo kale isticmaali karaa Wondershare MobileTrans in masixi xogta gaarka ah. Tani waa codsi kale oo ka iman kartaa haan marka aad rabto in aad masixi xogta gaarka ah. Qaar ka mid ah qaababka aad ka heli kartaa waxtar leh ee arjigan waxaa ka mid ah;
Waxaad isticmaali kartaa MobileTrans in xogta sida farriimaha qoraalka ah, abuse wac, sawiro, jadwalka, iyo music wareejiyo ka mid phone in kale.
Si aad u isticmaali kartaa si gurmad iyo soo celinta aad iPhone si fudud
Gelineya inaad sii xogta telefoonka aad xaqiijisatay xataa sida idinka wareejiyo
Awood aad si joogto ah masixi telefoonka jir
Halkan sida ay u masixi telefoonka isticmaalaya Wondershare MobileTrans.
Talaabada 1: Orod Wondershare MobileTrans iyo xirmaan telefoonka jir ah si aad u computer isticmaalaya fiilooyinka USB. In uu furmo suuqa hoose guji "masixi aad Old Phone."
Talaabada 2: geeska hoose ee bidixda, guji masixi Hadda. Sanduuqa gujisid A muuqan doonaa. Read talooyin iyo soo galaan "tirtirto" sanduuqa bixiyo. Markaas riix "bilaabaan" in ay masixi dhammaan xogta aad.
> Resource > iPhone > Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad Dib Marka la 6s New iPhone (Plus)